USAID Madagascar: tale vaovao Atoa John Dunlop | NewsMada
USAID Madagascar: tale vaovao Atoa John Dunlop
Tale jeneraly vaovaon’ny USAID eto Madagasikara Atoa John Dunlop, vao tonga eto an-toerana ary nahavita fianianana. Ny mpiandraikidraharaha Stuart Wilson no nampanao fianianana azy nandritra ny lanonana.
Maro ny toerana efa notazomin’i John maneran-tany, toy ny talen’ny Staff Care (sampana ao amin’ny USAID miandraikitra ny fiadanan-tsain’ny mpiasa) any Washington. Efa nitazona andraikitra tamin’ny maha tale jeneraly lefitry ny USAID tao Irak ihany koa ny tenany. Ankoatra izay, efa talen’ny demokrasia sy ny fitantanana tao amin’ny USAID Jordania izy. Manana traikefa manokana momba an’i Afrika ihany koa izy satria efa niasa tao amin’ny repoblika Centrafricaine nanao mpilatsaka an-tsitrapo an’ny Peace Corps, niasa tao Rwanda talohan’ ny vonomoka sy tao amin’ny Repoblika Demokratikan’i Congo niaraka tamin’ny Catholic Relief Services. Tao Kenya izy no niasa voalohany ho an’ny USAID ary avy eo, tao Tanzania.
Hiandraikitra ny fandaharanasa rehetra ao amin’ny USAID eto Madagasikara kosa izy manomboka izao, hanohy ireo asa efa niarahan’ny Amerikanina sy i Madagasikara hatramin’izany. Anisan’izany ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana izay imasoan’ny tetikasa maro.